Umjikelo ogqwesileyo wokujikeleza ukuhambisa kunye noMvelisi | IGOJON
Indibaniselwano yokujikeleza yokujikeleza kunye iibhodi imixokelelwano lula uhambise umqulu iphepha kwindawo efunekayo, kwaye ukusebenza eliphezulu, nto leyo kunciphisa kakhulu amandla abasebenzi kwaye kwandisa bhetyebhetye yonke inkqubo yokuhambisa iphepha roll. Inkqubo yokuhambisa iphepha ekrelekrele ikakhulu inoxanduva lokuhamba kunye nolawulo lwephepha elifunekayo kumgca weCorrugated.
● Ukwakheka kolwakhiwo: iphepha lokuhambisa elihamba ngephepha lokuqala, indlela ejikelezayo kunye nesakhelo (kusetyenziswa ujikelezo lwesakhiwo senkxaso);
● Imoto ejikelezayo: 1.1kw;
● Umda womatshini kunye nomda wombane kwisakhelo ；
● Ubuninzi bomthwalo: iitoni ezi-3.5;
● Yamkela uthotho lwe-Nokia, olusebenzisa idatha yokunxibelelana ngokuzimeleyo kunye nenkqubo yokuxhasa ukubala okukhawulezayo, ukuhanjiswa kwemoto, ibhasi ye-DP, unxibelelwano lwe-ethernet kunye neminye imisebenzi;
● Yamkela ulawulo oluzenzekelayo, kunye nomsebenzi ozenzekelayo / wokutshintsha kunye nomsebenzi wokuzilungisa ovalelweyo.
● Inkqubo inokuziqonda ngokwakho kunye nokusebenza kwe-alamu; Imodyuli ye-CPU ye-plc iya kuchonga ngokuzenzekelayo ukusebenza kwemodyuli ye-plc. Xa izixhobo kwinkqubo yokuhambisa isilele ngexesha lokusebenza, le nkqubo iya kunika isiginali yesandi evakalayo nebonakalayo ukukhumbuza umsebenzisi, kwaye unobangela wesiphoso uya kuboniswa ngokuzenzekelayo kwiscreen se-alamu sekrini sokuchukumisa, esilungele wena -Ukulawulwa kwabasebenzi kugqityiwe. Isixhobo sokumisa ngexesha likaxakeka, emva kokumisa okungxamisekileyo kwisiza sicinezelwe, sikhupha isekethe engqinelanayo engqinelanayo ukuqinisekisa imveliso ekhuselekileyo.
● Inkqubo inomsebenzi wokujonga kude, ofuna ukuba umthengi abonelele ngenethiwekhi yangaphandle kwikhabhathi yolawulo;
● Isetyenziswe ekuhambiseni nasekujikelezweni kwephepha roll
● Ukusebenza ngokuzenzekelayo ngaphandle kwabantu.
Sizimisele kwinkqubo yolungelelwaniso ekrelekrele, efanelekileyo nesilungiselelwe ushishino lwebhodi ebunjiweyo, kwaye sinikezela esona sisombululo sisiso sifanelekileyo sokuphuculwa kweshishini lezinto ezikrelekrele zeefektri ezirinjiweyo kwihlabathi liphela.
Ubeko Izixhobo Main
Egqithileyo Ityathanga leBhodi
Okulandelayo: Qhuba mqengqeleki swa
Inkqubo yokuThuthwa kwePhepha ngokuzenzekelayo
Ifolda yephepha le-A3, Umatshini oSebenzayo wePakethe yePhepha, Inqwelo yokuhambisa, Iinqwelo zokuhambisa iiRoller, Indawo yokuSebenza yeWorkshop, Ibhanki ye-Erp,